Fepetran'ny serivisy - Pisa Pelle Italiana hoditra
Ity tranonkala ity dia i Pisa Pelle. Manerana ny tranokala, ny teny hoe "isika", "isika" ary "antsika" dia manondro an'i Pisa Pelle. Pisa Pelle dia manolotra ity tranonkala ity, ao anatin'izany ny fampahalalana rehetra, ny fitaovana ary serivisy rehetra azo avy amin'ity tranokala ity aminao, ilay mpampiasa, raha tsy ekena ny fanekena rehetra, ny fepetra, ny politika ary ny fampahalalana voalaza eto.
Manakana ny zo tsy handà ny lamina napetrakao aminay izahay. Azontsika atao, amin'ny fisainantsika irery, hamerana na hanafoana ny habetsy nividianana olona, ​​isaky ny trano na isaky ny filaminana. Ireo fepetra ireo dia mety ahitana ny baiko napetraka na eo ambanin'ny kaonty mpanjifa, karatra mitovy, ary / na baiko izay mampiasa ny faktiora sy / na ny adiresy fandefasana. Raha toa ka manao fanovana isika na manafoana baiko, dia mety manandrana mampita anao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny adiresy e-mail sy / na faktiora / nomeraon-telefaonina nomena tamin'ny fotoana nanaovana ny baiko. Isika dia mamaritra ny zo hamerana na mandràra ny baiko izay, araka ny fitsarana antsika, dia toa asehon'ny mpivarotra, mpaninjara na mpaninjara.
Manaiky ianao fa ny fanehoan-kevitrao dia tsy manitsakitsaka ny zon'ny olon-kafa rehetra, anisan'izany ny zon'ny mpamorona, ny marika, ny fiainana manokana, ny maha-olona na ny zon'ny tsirairay na ny propriétaires. Ekenao koa fa ny fanehoan-kevitrao dia tsy ahitana votoaty manafintohina na tsy ara-dalàna, na fanevatevana na vetaveta, na ahitana viriosy amin'ny solosaina na malware hafa izay mety hisy fiantraikany amin'ny asan'ny serivisy na tranonkala mifandraika amin'izany. Mety tsy mampiasa adiresy e-mail diso ianao, miangavy anao ho olon-kafa fa tsy ny tenanao, na raha tsy izany dia mamitaka antsika na ireo antoko fahatelo isika amin'ny fiandohan'ny hevitra rehetra. Ianao ihany no tompon'andraikitra amin'ny fanehoan-kevitra rehetra ataonao sy ny fahamarinany. Tsy mandray andraikitra izahay ary tsy mandray andraikitra amin'ny fanehoan-kevitra rehetra napetraky ny anao na ny antoko fahatelo.
Tsy misy na inona na inona i Pisa Pelle, ny talenay, ny manampahefana, ny mpiasa, ny mpiara-miasa, ny mpandraharaha, ny mpiantoka, ny interns, ny mpamatsy, ny mpanome tolotra na ny fahazoan-dàlana dia tompon'antoka amin'ny fahavoazana, fatiantoka, fitakiana, na koa mivantana, tsy ankolafy, sendra, manasazy, manokana, na fahasimbana azo avy amin'ny karazan-javatra rehetra, ao anatin'izany, tsy misy fetra very tombony, very vola, tahiry very, fahaverezan'ny data, vidin'ny fanoloana, na fahasimbana mitovy, na miorina amin'ny fifanarahana, fampijaliana (anisan'izany ny tsy miraharaha), ny andraikitra feno na raha tsy izany, nipoitra avy amin'ny ny fampiasanao ny serivisy na ny vokatra rehetra azo tamin'ny fampiasana ny serivisy, na ho an'ny fangatahana hafa mifandraika amin'ny fomba fampiasana ny serivisy na vokatra, tafiditra ao anatin'izany, fa tsy voafetra ihany, misy hadisoana na tsy fetezana amin'ny atiny, na misy fatiantoka na fahasimbana amin'ny karazam-bidy ateraky ny fampiasana ny serivisy na izay atiny (na vokatra) navoaka, nampitaina na nampitaina tamin'ny alàlan'ny serivisy, na dia nanoro hevitra azy ireo aza ny mety hitranga. Satria ny fanjakana na ny fanjakana sasany tsy mamela ny fandroahana na ny famerana ny andraikitra noho ny fahavoazana mihatra na kisendrasendra, any amin'ireo fanjakana na faritany toy izany, ny adidintsika dia ho voafetra hatrany amin'ny fetra farany navelan'ny lalàna.
Manaiky ny hanome trosa sy miaro ary mitana an'i Pisa Pelle tsy manimba ary ny ray aman-dreninay, ny orinasam-pifandraisana, mpiara-miasa, mpiara-miasa, manamboninahitra, tompon'andraikitra, mpisolo toerana, mpiantoka, fahazoan-dàlana, mpanome tolotra, subcontractors, mpamatsy, interns ary mpiasa, tsy manimba ny fitakiana na fangatahana, ao anatin'izany ny saram-panao mpisolovava mety, nataon'ny antoko fahatelo noho ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny serivisy fanompoana na ireo antontan-taratasy napetrak'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanamarihana, na ny fanitsakitsahana ny lalàna na ny zon'ny antoko fahatelo.
Ireo fepetran'ny tolotrasa sy ireo fifanarahana samihafa izay ahafahantsika manome Tolotra dia fehezina sy omena araka ny lalàn'i Etazonia.
Ny fanontaniana momba ny Terms of service dia tokony halefa aminay ao amin'ny sales@pisapelle.com.